प्रदेश नं. १ मा एमाले अल्पमतमा, एमालेका १० सांसद नेकपा एसमा – Kanika Khabar
प्रदेश नं. १ मा एमाले अल्पमतमा, एमालेका १० सांसद नेकपा एसमा
Kanika Khabar १६ भाद्र २०७८, बुधबार १३:२० September 1, 2021 मा प्रकाशित
भदौ १६, दाङ ।
नेकपा एमाले विभाजन भएर नेकपा एस दर्ता भएपछि एमालेका सांसद तथा जनप्रतिनिधिहरुले दल रोज्न थालेका छन् । निर्वाचन आयोगले यही भदौ २२ गतेसम्म दल रोजेर सम्बन्धित प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा सनाखत गर्न समय दिएको छ ।
यसैक्रममा प्रदेश नम्बर १ प्रदेश सभामा रहेको नेकपा एमालेका ५१ जना सांसद मध्ये १० जनाले एमाले विभाजनपछि बनेको नयाँ दल नेकपा एस रोजेका छन् । उनीहरुले बुधबार प्रदेश निर्वाचन कार्यालय मोरङमा नेकपा एस रोजेको सनाखत गरेका छन् ।
९० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ५१ जना सांसद थिए । अब सो पार्टीमा ४१ जनामात्र सांसद रहेका छन् । हालै एमालेको एकल बहुमतका आधारमा भीम आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, एमाले विभाजन भएकाले उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । उनले बहुमत पनि गुमाएका छन् ।